Ukulandelana yikhwalithi namuhla ewusizo ukuba abe nabamele kuphela imisebenzi ethile: osombusazwe, othisha, umethuli we-TV. Abanye abantu bazinikezwe kusukela ekuzalweni, abanye baphoqeleka ukuba baqhubeke isikhathi eside futhi bephikelela ekuthuthukiseni. Indlela yokuhlakulela kahle labo abangakazi ubuciko bokukhuluma kahle? Ukuzivocavoca okuqoqwe kulesi sihloko kuzosiza kulokhu.
Indlela yokuthuthukisa ukukhuluma: umsebenzi osebenza kahle
Ukuzivocavoca, okuvame ukuphakanyiswa ngezifundo ze-oratory, kungase kubonakale kukuhle, kodwa kunikeza imiphumela emihle kakhulu. Indlela yokuthuthukisa ukukhuluma ngaphandle kokuya ekufundiseni okukhethekile? Kudingekile ukukhetha into yempahla yasendlini, uthi, ipanethi, bese uyichaza ngendlela enemininingwane kakhulu, ngolimi oluhle lwezincwadi.
Abantu abayinselele kulo msebenzi bangaqala ngemininingwane eminithi emithathu. Isikhathi sanda kancane kuze kube yilapho umuntu efunda ukukhuluma ngendaba efanayo ngesigamu sehora ngaphandle kokuphindaphinda emicabangweni yakhe ngaphandle kokusebenzisa izici ezifanayo.
Indlela yokuthuthukisa ukuhleleka ngosizo lwesichazamazwi solimi lwesiRashiya (noma yikuphi)? Izifundo zibonise ukuthi umuntu ovamile ekuphileni kwansuku zonke usebenzisa amagama angama-4 000. Ngenxa yalokho, abantu abakwazi ukuveza imicabango evela kubo, ngenxa yokungabi nolwazi lwesilulumagama. Inkinga inesisombululo esilula - ukufunda ngenhliziyo amagama amasha.
Udinga ukuthenga isichazamazwi esincane, esilula ukuthwala, futhi nsuku zonke ukubhekana nayo emaminithini mahhala. Ungabeka umsebenzi - ukubamba ngekhanda nsuku zonke incazelo okungenani amagama ayishumi angajwayelekile. Ukuzivocavoca umzimba akuthinti nje kuphela ukukhuluma, kepha futhi ku-intelligence kanye nenkumbulo.
Indlela yokuthuthukisa ukukhuluma ngaphandle kokusebenzisa isichazamazwi? Ukwandisa isilulumagama kusiza ukufunda. Futhi akudingeki sifunde nje kuphela inganekwane, kodwa futhi nesayensi, ireferensi, nobuchwepheshe.
Indlela yokuthuthukisa ukukhuluma ngokukhululekile ngezihloko ezahlukene? Imiphumela emihle ibonisa umsebenzi ohlotshaniswa nokuguqulwa kwamagama. Yisho, udinga ukuthatha umbhalo omncane, bese zonke izenzo ezikhona kuwo zishintshwa ngokuvumelanisa, okuhambisana nencazelo. Ukusebenza okufanayo kungenziwa ngamagama onke: izichasiso, izibizo, iqhaza. Lo msebenzi uholela ekusebenziseni isilulumagama esingaqapheli umuntu ayenakho, kodwa asisetshenziselwa ukusebenzisa.
Ukuzivocavoca okufanayo ukuhlanganiswa kwenhlanganisela yegama ngamagama enencazelo ehlukile. Ake sithi, amanzi omile, i- giant encane, ushukela obabayo, i-tortle esheshayo njalonjalo. Lokhu kunomthelela omuhle hhayi kuphela ekuhloliseni, kodwa nangokucabanga okudala.
Omunye umzimba othakazelisayo yi-"decoding" yamazwi. Kudingeka ukhethe igama, bese ucabanga ukuthi yisifingqo esidinga ukuchithwa. Okokuqala, kungcono ukusebenzisa amagama ambalwa, bese uqhubekela phambili eziyinkimbinkimbi. Ake sithi, ihlobo - "i-raccoon ithenda ithatha i-sawdust". Okokuqala, unganaki ukuqonda, futhi kancane kancane "ukuhumusha" kuzophumelela ngokwengeziwe.
Indlela yokuthuthukisa ukuhleleka? Ukuzivocavoca okuhlobene nokubuyiswa kwemibhalo kuzokusiza. Kudingekile ukuthatha isihloko sephephandaba, ufunde ngokucophelela, bese usho okuqukethwe okuqukethwe kwenothi kwisitayela sokuxoxa. Leli phepha liphindaphindiwe izikhathi eziningana, umlando ususelwe futhi wandisa, wenziwe ngemininingwane emisha, kufaka phakathi amanga. Kumele baveze umbono wabo mayelana nendaba efundwayo. Njengomlaleli ungakhetha isibuko.
Kubalulekile ukuthi okungenani iziphakamiso eziyishumi zokuqala zixhunyiwe, zibushelelezi, ngaphandle kwezimiso zokufakelwa. Kubalulekile futhi ukuthi ufunde indlela yokudlulisa okuqukethwe kombhalo emusho owodwa. Esikhundleni se-athikili yephephandaba, ungathatha izigaba ezincwadini zokufunda, izahluko ezincwadini. Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukuchaza izithombe ezibonwayo, ukufakazela incazelo ngokuhlola ikhono lomculi.
Umsebenzi obunzima kakhulu ukubuyisela umbhalo, kulokhu umlandeli akuqondi kahle. Noma kunjalo, ukuqeqeshwa okuqhubekayo namathekisthi alula kuzosiza kancane kancane ukuthi lo mdwebo uphumelele.
Ukulawula ubuso obuso
Ukulandelana: indlela yokuthuthukisa ngayo lesi sipho, abantu abaningi abaphuphayo? Ukwandisa isilulumagama nokubuyisa imibhalo kuzokusiza, kepha udinga ukunaka nokuzivocavoca okukuvumela ukuthi ufunde indlela yokuphatha ubuso bakho.
Ukuma phambi kwesibuko, udinga ukubuyisa noma yimuphi umbhalo (ubuciko, isayensi, ubuchwepheshe) ngaphandle kwemzwelo, bese uyiphinda ngokuxhuma ubuso nesenzo. Kubuye kusize ukuphinda ukhulume ngokuphindaphindiwe inkulumo efanayo, uguqule njalo inkulumo nokuhamba kwenkulumo.
Indlela yokuthuthukisa ukuhleleka? Lokhu akukwazi ukufezwa kuphela ngokutadisha inkolelo, ngoba isikhulumi sezochwepheshe esizayo sidinga umkhuba oqhubekayo. Kudingeka ukukhulumisana ngangokunokwenzeka, ukwandisa ngokuhlelekile umbuthano wokuxhumana, ukujwayele nabantu abasha abathakazelisayo. Kuyasiza futhi ukugcina izinkulumo zabamethuli kuthelevishini, beza ukuqeqesha futhi bahlole izinkulumo zezikhulumi. Okokugcina, kubalulekile ukunaka ukuthuthukiswa komuntu siqu, ngoba ihlaya elihle lizoba umhlobiso wendaba. Ukufeza lokhu kalula, ukukhumbula nge-anecdotes yenhliziyo engenangqondo nokubuka izinhlelo ezihlekisayo.
Ukuhlola izimpumelelo zakho kuzosiza idivayisi enjalo ewusizo njenge-dictaphone. Ngemuva kokubhala phansi indaba yakho, kufanele uyilalele, uhlole amaminithi nezinzuzo. Kungenzeka ukuthi umlandisi udinga ukuqeda amagama-ama-parasites, eqinisweni ukuthi inkulumo yakhe izwakala inganaki noma ukhuluma ngokushesha.
Ukulandelana kanye nezingane
Indlela yokuthuthukisa ukukhuluma kahle kwengane? Ukufezekisa lokhu, njengabantu abadala, ukuzivocavoca okulula kuzosiza. Kubalulekile ukubuza indodana noma indodakazi ukuba iqoqe lokhu noma leyo ndaba, bese uyichaza ngemininingwane eminingi: ukuma, impahla, umbala nokunye. Ukunciphisa umsebenzi wengane kuzosiza ukubuza imibuzo.
Kanti futhi, abadala bayakwazi ukubuza izingane imibuzo engahileleki impendulo ye-monosyllabic. Isibonelo, ungakwazi nje ukubuza ingane ukuthi wayenzani namuhla enkulisa, bese ulalela ngokucophelela impendulo, ukhuthaze umlandeli omncane ngemininingwane.
Into eyinhloko ukuzivocavoca njalo, bese umphumela ngeke ukwenze ulinde.